SOMALITALK - XAAFIDAD
Gabar Lix-Jir ah oo Xaafidad ah.
Video: gabadha oo la weydiinayo su'aalo ku saabsan quraanka: ka daawo halkan ama daawo halkan...
Tarjumaad: Su'aalihii gabadha lix-jirka ah la weydiiyey oo Afsoomaali ku tajuman ka akhri halkan... Guji..
FADUMA MIR AL-LOWXI
ka daawo halkan ama daawo halkan...
Tani waa gabar yar oo udhalatay waddanka Iiraan, magaceedana layiraahdo FAADUMO MIIR AL LOWXI. Waa lixjir, hayeeshee waa gabar cajiib ah oo Ilaahay kitaabkiisa sifiican u xifdisan dhinac walba. Sida kamuuqata Video-ga waxaa usoo saftay rag badan oo macallimiin ah inay weeydiiyaan su'aalo badan oo laxiriira kitaabka Ilaahay.
Su'aalaha laweeydiiyey iyo munaasabaddaas oo ay soo gudbisay idaacadda layska arko ee waddanka Lubnaan, waxay gabadhaan yari kajawaabtay su'aalihii laweeydiiyey oo dhan oo kala ahaa:
1) Inay sheegto ayado qur'aanka kamid ah oo hadba meel looga soo qabanayey.
2) Inay sheegto suuradda ay kujirto aayaddaasi.
3) Inay sheegto lambarka aayadda.
4) Inay sheegto beeyjka ay uga taallo aayaddu ma bidixbaa mise waa midig, haddana ma kor baa mise waa hoos mise waa dhexda.
5) Inay sheegto imisa aayadood oo tan oo kale ah ayaa kujira quraanka.
6) Inay sheegto meesha ay kusoo degtay(Makkah mise Madiinah).
7) Waxaa kale oo laweeydiiyey, su'aalo kale oo ah, sheeg inta aayadood ee quraanka kusoo arooray moowduucyada kala ah: IXSAANKA, ISHA LAABISTEEDA iyo MACRUUFKA iyo MUNKARKA, si fiican ayayna uga jawaabtay.
Raggii su'aalaha weeydiinayey oodhan iyo kuwii dhagaysanayeyba waa wada fajaceen, waana umalayn waayeen in ilmo lix jir ihi saas noqon karo. Shaki kuma jiro in Ilaahay amarkiis kasokoow, ay waalidkeed iyo macallinkeediiba dadaal fiican sameeyeen.
Allaah waxaan kabaryaynaa inuu xaqa nagu sugo annaga iyo ubadkeennaba.
Maxamed Axmed alhudaa1@yahoo.ca
QORAAL FAAHFAAHSAN: waa Faadumo Miir Al-Lowxi, oo da'deedu tahay lixsano (6 jir), oo la waydiinayo su'aalo kala duwan, waxaa ugu horayn la waydiiyey 7 so'aalood oo qur'aan ah iyo su'aalo isugu jira Xajka,jihaadka,Salaada,soomka iyo Zakada